एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा शङ्का गर्नुपर्ने कारण म देख्दिन : निर्वाचन अधिकृत विश्व बराल – NepalayaNews.com
एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा शङ्का गर्नुपर्ने कारण म देख्दिन : निर्वाचन अधिकृत विश्व बराल
१९ फाल्गुन २०७५, आईतवार ०२:२८
अमेरिकामा लामो समय देखी बसोबास गर्दे आएका विश्व बराल पेशाले सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन । विभिन्न सघं सस्धामा सक्रिय भूमिका खुल्दै आएका बराल गत एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचन कमिटिमा सदस्यको भूमिका निर्बाहा गरेका बरालले अब हुन गईगरेका एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृतको भूमिका निर्बाहा गरिरहेका छन् उनै बरालसगं नेपालयले गरेको कुराकानी
विगतमा पनि एनआरएन र निर्वाचन समिति बिच विवाद हुने गर्दथियो यो पाली पनि विवाद नहोला भनेर कसरी भन्न सकिएला र ?
विगतमा निर्वाचन भन्दा पनि सदस्य बनाउने प्रक्रिया राम्रो भएन भन्ने धेरै गुनासो आएका थिए े । विगतमा एउटा इमेल आइडी बाट उन्नाईस वटा सम्म सदस्य बनाएको पाइएको थियो । गत साल किनकि एउटा इमेल वाट उन्नाइस वटा भोट राख्नु भनेको सख्खासपद कुरा हो त्यसैले धेरै साथीहरूले विरोध गरी रहनु भएको थियो । त्यसपछि हाम्ले बोर्डमा के सल्लाह गरौँ भने कि एउटै परिवारको हुनु परो कि एकै ठाउँमा बसेको हुनु परो भनेर हामीले मध्यम बाटो अपनायौ । साथै तिन वटा व्यक्तिको एउटै इमेल आइडी बाट आएको छ भने पनि हाम्रो नियम अनुसार त आएन त्यस्तो निवेदनहरूलाई हामीले जो पहिलो मेल आएको छ त्यसलाई मात्र मान्यता दिएको थियौ ।
अहिले त्यस्तो समस्या देखिँदैन होला नि ?
अहिले मैले राम्ररी हेर्ने पाएको छैन तर अहिले सबै जनाले सम्पूर्ण विवरण भर्नु पर्ने भएकाले त्यो हिसाबले पनि सही डाटा आएको हुनुपर्दछ ।
कहिले सम्म भोटरहरूको आइडी प्राप्त हुन्छ ?
मैले आधिकारिक रूपमा त जानकारी पाएको छैन तर फेसबुक तथा अनलाइनहरूमा देखेको समाचार अनुसार मार्चको पहिलो हप्ता सम्म आइपुग्छकी जस्तो लाग्दछ ।
भोटरहरूको आइडी खरिद बिक्री भएको हल्ला पनि छ नी ?
अहिलेको नियम अनुसार भोटरहरूको जुन नाम लिस्ट तयार भएको छ त्यसमा धेरै शङ्का गर्नुपर्ने कारण म देख्दिन किनकि सबै साथीहरू बसेर कुनै पनि तरिका वाट गलत सदस्यहरू नवनुन भनेर सबै साथीहरू लाग्नु भएको छ ।
तपाइलाई वर्तमान अध्यक्षको नजिकको मान्छे भनेर चर्चा गरिन्छ यसले गर्दा निर्वाचनलाई त असर गर्दैन ?
मेरो लागी यहाँ बस्ने सबै नेपालीहरू नजिकका मान्छे हुन । म यहाँ बसेको पनि धेरै भयो त्यसले गर्दा धेरै साथीहरू सँग मेरो भेटघाट हुने गर्दछ भेटघाट हुँदाको साथी नजिकको हुने भेटघाट नहुने साथी टाँडाको भन्ने हुँदैन । अहिले म जुन पदमा छु त्यो हिसाबले पनि मेरो लागी गाई गङ्गा बराबर हो । कालो टोपी लगाए पनि नेपाली ढाका टोपी लगाए पनि नेपाली मधेसको सेतो टोपी लगाए पनि नेपाली माथि हिमालको बाक्लो टोपी लगाउने पनि नेपाली मेरो लागी सबै बराबर हुनुहुन्छ । साथै यो समितिमा जो आए पनि नेपाली आउँछ सबै हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौ । उमेरले पनि अहिले म ५५ वर्ष भए विद्यार्थी काल देखि आजसम्म मैले मेरो जीवनमा कुनै दाग लगाउने काम गरेको छैन । नेपालमा म सँगै पढेका साथीहरू कोही सचिव हुनुभयो कोही मन्त्री हुनुभयो हामी भने यो बिरानो मुलुकमा आएर बसी रहेको छौ र आजसम्म त्यस्तो कुनै दाग लाग्ने कुनै काम नगरेकोले अब पनि गर्न नपरोस त्यस्तो कुनै दबाब म सहन सक्दिन र त्यस्तो तलमाथि हुने काम कुनै पनि हालतमा म बाट हुने छैन ।
यसपालिको भोटिङको लागी गत वर्ष कै कम्पनीलाई दिने विचार गर्नुभएको छ की नयाँ कम्पनीलाई दिने विचार गर्नुभएको छ ?
यसपालि साथीहरूले विभिन्न कम्पनहिरु हेरिरहनुभएको छ त्यसको लागी दुई जना साथीहरूलाई त्यसमा खटिनुभएको छ । हाम्रो विधानमा भएका सबै कुराहरूलाई समेटेन गरेर साथै सबैलाई सहज हुने गरेर जुन कम्पनीले हामीलाई राम्रो सुविधा दिन्छ त्यही कम्पनीलाई भोटिङको जिम्मा दिन्छौ । सायद पहिलेको कम्पनी नहुन पनि सक्छ ।
गत साल जस्तो निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुँदै बाहिर आएको थियो यो पाली पनि त्यस्तै हुने हो की ?
गत वर्षा त्यस्तो नहुनु पर्ने हो भयो त्यसले गर्दा यो पाली हामी विशेष चनाखो हुने छौ । गत वर्षा के भएको थियो भने अन्तिममा तिन चाँरवटा विकल्पहरू हुँदो रहेछ ब्लक गर्ने,एकै चोटि पछि घोषणा गर्ने तुरुन्तै गर्ने यस्ता तिन चार वटा विकल्पहरू रहेछन् र यिनिहरुकोमा के रहेछ भने जसले अन्तिम भोट हाल्छ उसले हेर्न मिल्ने अप्सन रहेछ जस कारण सार्वजनिक भयो ।
निर्वाचन मिति कहिले समय घोषणा गरिन्छ ?
सबै तयारी भइरहेको छ उम्मेदबारीका लागी पनि अन्य केही नयाँ नियमहरू पनि बनाई रहेका छौ हामीले मे महिनाो दोस्रो तथा तेस्रो हप्ता तिर निर्वाचन गर्ने सोची रहेका छौ ।
कोरोनाका कारण अमेरिकामा थप १ नेपालीको मृत्यु, विदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या २४४ पुग्यो	४ आश्विन २०७७, आईतवार १५:०४
विदेशमा १९२ नेपालीकाे मृत्यु , फर्कने वातावरण मिलाउन एनआरएनएकाे सरकारसँग आग्रह	७ भाद्र २०७७, आईतवार १४:५१
आगामी दिनमा कोरोना संक्रमण थप र लगातार वृद्धि हुने संभावनाः डा.एन्थोनी फाउची १९ फाल्गुन २०७५, आईतवार ०२:२८
जो बाइडेनले मात्रै होइन, उनको कुकुरले पनि रच्यो इतिहास १९ फाल्गुन २०७५, आईतवार ०२:२८
जो बाइडेनको सिनियर प्रेस टीममा महिलालाई मात्र स्थान दिइने १९ फाल्गुन २०७५, आईतवार ०२:२८